ကုမ္ပဏီများ | /// stage /// – အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် နည်းလမ်းသစ်
ကုမ္ပဏီများအတွက် English Attack!
အင်္ဂလိပ်စာသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးသာမက ကုမ္ပဏီ၏ အဆင့်တိုင်းအတွက် ဗျူဟာကျသည့် ရင်းမြစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုနှင့် တိုးတက်ရေးအတွက်သာမက အင်တာနက်၊ နည်းပညာ နှင့် အချက်အလက်များ ဗဟုသုတများအတွက်လည်း အဓိက ဘာသာစကားဖြစ်ပါသည်။
ကြီးထွားလာသည့် နိုင်ငံတကာအလုပ်ရှင်များ နှင့် ဈေးကွက်များနှင့်အတူ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် စီးပွားရေးလုပ်နိုင်စွမ်းမှာလည်း အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာသည့် ကုမ္ပဏီလိုအပ်ချက် ဖြစ်လာပါသည်။
အခြား အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရေးများနှင့် မတူသည်မှာ (ဥပမာ စာပေ လေ့လာရေးခရီးများ, သင်တန်းများ, သို့မဟုတ် သမားရိုးကျ "e-learning") English Attack! ၏ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုဖြစ်ပြီး ၄င်းကြောင်း မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆို အဆင့်တိုင်းတွင် အသုံးချနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်၏ သုံးစွဲနိုင်မှုနှင့် ဆွဲဆောင်မှုတို့ကြောင့် ဝန်ထမ်းများသည် ၄င်းတို့၏ ထရိန်နင်တွင် အပြည့်အဝပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဘာသာစကား အမှန်တကယ်တိုးတက်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီများအတွက် English Attack! အဖြေတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားသော ပုံစံများနှင့် ဈေးနှုန်းများ ပါဝင်ပါသည်။
ဈေးနှုန်း အချက်အလက် တောင်းဆိုမှု
စကားပြောသော သုံးစွဲမှု အချက်အလက်များ
သမားရိုးကျ e-learning များသည် အသုံးပြုပြီးခဏအကြာတွင် ပျင်းရိသွားစေသော်လည်း English Attack! မှဖန်တီးထားသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်မြုပ်သင်ကြားခြင်းသည့် စာသင်သားများထံမှ စိတ်ပါဝင်စားမှုပို ပိုမိုရရှိစေပါသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အသုံးပြုနေသော အင်္ဂလိပ်စကားအမှန်များကို ရုပ်ရှင်ဖြတ်ပိုင်းများ၊ သတင်းများ နှင့် ဂီတတို့ဖြင့် စာသင်သားများ၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုကို တစ်ကြိမ်ထက်တစ်ကြိမ် ပိုမိုရရှိစေပါသည်။ ဤသည်မှာ English Attack! မှဖန်တီးထားသည့် စနစ်ဖြစ်သည့် ပွိုင့်များ၊ အောင်မြင်မှု အဆင့်ကဒ်များ နှင့် ဆုတံဆိပ်များစသည်တို့ ပါဝင်သည့် အားပေးစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ များပြားလှသော သင်ယူမှုယူနစ်ခေါင်းစဉ်များသည် (ဗီဒီယို လေ့ကျင့်ခန်းများ နှင့် ပုံပြအဘိဓါန်များ) လေ့လာသူများကို မပျင်းရိစေပဲ လေ့ကျင့်စေနိုင်ပါသည်။
သင်ယူမှုယူနစ် အမျိုးအစားများသည် လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး တစ်ချိန်လျှင် ၄၁မိနစ်စာမျှသာဖြစ်သောကြောင့် အာရုံစူးစိုက်မှုကို စွဲမြဲစေပါသည်။
English Attack! မှာယူသူ ၈၇%သည် တစ်ပတ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ဤလေ့ကျင့်ခန်းကို သင်ယူလေ့လာကြပါသည်။
ပျမ်းမျှ တစ်ပတ်လျှင် ၃.၆ ကြိမ်ဖြစ်ပါသည်။
ပျမ်းမျှ တစ်ပတ်လျှင် အသုံးပြုမှုကြာချိန် : ၂နာရီ ၂၈မိနစ်။ ၈၀%အထက်သည် ထိုအချိန်အတွင်း အမှန်တကယ်လေ့ကျင့်ခန်းများ ကို လေ့ကျင့်ကြသည်။
တစ်ပတ်လျှင် လေ့ကျင့်ခန်း ၉.၈ခု ဖြစ်သည်။
* အချက်အလက်: Google Analytics - English Attack! မှာယူသူများ - ရက်သတ္တပတ် ၇ - ၂၀၁၃
Video Boosters များအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်
Photo Vocabs များအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်
Practice Games များအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်
ကုမ္ပဏီများ ပလက်ဖောင်း၏ အားသာချက်များ
သင့် လေ့ကျင့်ရေး လိုအပ်ချက်များအတွက် အလွယ်တကူရယူနိုင်သော အဖြေ
ကုမ္ပဏီများအတွက် English Attack! သည် သင့်ဝန်ထမ်းများကို အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည် အလိုအလျောက် တိုးတက်စေပါသည်။ ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံနည်းကျ အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်တိုင်းအတွက် ပါဝင်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြီး ဝန်ထမ်းတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်နိုင်စွမ်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးတည်ချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းတို့ကို အစွမ်းကုန် တိုးတက်စေပါသည်။
၁၀၀% ဝက်ဘ်အခြေခံဖြစ်ပြီး English Attack! ကိုသုံးစွဲရန် မည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုမှထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပဲ အလုပ်ဌာနများတွင်ကော အိမ်တွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ စက်မျိုးစုံမှ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၁၅%သောအသုံးပြုသူများသည် စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်များမှ အသုံးပြုနေကြပါသည်။
သင့်ဝန်ထမ်းများအား ပို၍ကောင်းမွန်သော သင်ယူမှုကို ပေးလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီ ပလက်ဖောင်းဖြင့် သင်တန်းဆရာအကောင့်များ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သင်သည် ပေါင်းစပ်သင်ကြားမှု သို့မဟုတ် အဝေးသင်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
မိမိဘာသာ အလိုအလျောက် သင်ယူနိုင်သည့် e-learning
သင်ကုမ္ပဏီအတွက် အထူးဖန်တီးထားပေးသော သိပ္ပံဝိဇ္ဇာပါဝင်မှုများ
ဗီဒီယိုပေါင်း ၁,၀၀၀ နှင့်အထက် ဝေါဟာရဓာတ်ပုံပေါင်း ၅,၀၀၀ ကျော် ပါဝင်ပြီး English Attack! လေ့ကျင့်ခန်းများသည် စီးပွားရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာများ(စီးပွားရေးအင်္ဂလိပ်၊ ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးရှိ လုပ်ငန်းများအတွက် စကားလုံးအနှစ်ချုပ်) စသဖြင့် အကြောင်းအရာပေါင်းစုံအတွက် ပြုလုပ်ထားပါသည်။
သင့်ကုမ္ပဏီသည် ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပြီး သီးသန့်စိတ်ကြိုက် ပါဝင်မှုများ ထည့်သွင်းလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ မာလတီမီဒီယာအယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှနေ၍ သင့်လုပ်ငန်းခွင် သို့မဟုတ် သင့်ဘရန်း သင့်ကုမ္ပဏီအတွက် သီးသန့်သင်ယူမှုယူနစ်များကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ သင် သို့မဟုတ် သင့်ပြိုင်ဘက်၏ ကြော်ငြာ၊ ဗီဒီယိုအခြေခံလေ့ကျင့်ခန်းများ၊ သတင်း၊ ထရိန်နင် ဗီဒီယို သို့မဟုတ် အင်တာဗျူးများပေါ်အခြေခံသည့် ယူနစ်များ။ သီးသန့်ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများကိုလည်း ပုံပြအဘိဓါန်များအဖြစ် ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။
ဤမှာယူနိုင်သော ယူနစ်များသည် သင့်ကုမ္ပဏီအတွက် သီးသန့်ဖန်တီးပေးထားသော ဝက်ဆိုက်တွင် သင့်ဝန်ထမ်းများသာ အသုံးပြုနိုင်မည့် သီးခြားယူနစ်များ ဖြစ်ပါသည်။
English Attack! ကို သင့်ကုမ္ပဏီအတွင်းတွင် ဖြန့်ဝေခြင်း
The English Attack! ကုမ္ပဏီများ ပလက်ဖောင်းသည် အသုံးချရန် လွယ်ကူသော လူများစွာအသုံးပြုနိုင်သည့် အဖြေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဝန်ထမ်းအကောင့်များဖန်တီးရန် သီးခြားဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ထည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။ အကောင့်များကို အက်တီဗိတ်လုပ်ရန် ကုဒ်များဝေပေး၍သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် သင့်ဝန်ထမ်းဒေတာဖိုင်များမှသော်လည်းကောင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီများ ပလက်ဖောင်းသည် ကျောင်းသားအထူးပြု လုပ်ဆောင်ချက်များ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲ စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ကုမ္ပဏီသင်တန်းဆရာသို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ရေးကြီးကြပ်သူများမှနေ၍ ဝန်ထမ်းများ၏ ဆိုက်အသုံးပြုပုံ၊ တစ်ဦးချင်းရီပို့၊ ဆိုက်အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ၊ ပြီးဆုံးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ရရှိပြီး ရမှတ်များ နှင့် အောင်မြင်ပြီးအဆင့်များကို ဒတ်ရ်ှဘုတ်မှနေ၍ ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
လေ့ကျင့်ရေးကာလ နှင့် သင်တန်းသားအရေအတွက်ပေါ်အခြေခံပြီး ရရှိမည့် လက်ကားလျှော့ဈေးများကို သင်ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သင်သည် ကုမ္ပဏီလူကြီးတစ်ဦး သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းခန့်ထားရေး ထရိင်နင်မန်နေဂျာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သင့်ဝန်ထမ်းများ၏ အင်္ဂလိပ်စာကို English Attack ကုမ္ပဏီများ အစီအစဉ်ဖြင့် တိုးတက်စေလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။